Hogganoota Kongreesa Federaalawaa Oromoo kan ta’an Obbo Baqqalaa Garbaa, Obbo Gurmeessaa Ayyaanoo, Obbo Addisuu Bullallaa fi Obbo Dajanee Xaafaa irratti ragaa ittisaa dhaggeeffachuu jalqabuuf har’atti bellamnii qabamee ture hin milkoofne.
Garu aangawoonni mootummaa kanneen ragaa ittisaa ta’uun himatamtootaaf dhiyaatu jedhamee eegamaa turan xalayaan waamichaa mana murtii biraa waan isaan hin dhaqqabneef jecha hin dhiyaanne jedhe manni murtii olaanaa kan Federaalaa dhaddachii arfaffaan.
Inumaayyuu manni murtii gaaffii haaraa kaaseen aangawoota kana akka ragaatti kan barbaaddan maaliif? Jechuun gaaffii ka dhiyeessan yoo ta’u barbaachisummaa dhiyaachuu aangawoota kanaa irratti sadaasa 6 bara 2010 dubbanna jechuun bellama kenne jedhu abukaatoon himatamtootaa.
Dhimma manni murtii ajaja itti keenne tokko duubatti deebisanii bifa biraa qabsisuun kun yeroo torban tokkoo keessatti yeroo lammaffaaf mudachuu isaati. Wiixata darbee Obbo Baqqalaa Garbaa wabiin akka hidhaa ba’an erga murtiin kennamee booda dhuma irratti keessa deebi’amee ilaalamuuf bellamamuun ni yaadatama.
Galmee Obbo Gurmeessaa Ayyaanoo irratti kannen himataman namoota ka biroo 13 irratti ragaa dhaggeefachuun har’a kan jalqabamee yoo ta’u Robii fullee keenyaa xumurama jedhamee eegama.Imatamtoonni shank an galmee kana keessa turan walaba gadhifamuun ni yaadatama.
Angawoota ragaa ittisaa jedhamuun maqaa dhahaman kan mootummaa Fedeeraalaa fi kan bulchiinsa naannoo Oromiyaa shan turan. Isaanis mummicha ministeera Itiyoophiyaa Haayle Maariyaam Dassaaleny, prezidaantii mootummaa naannoo Oromiyaa Obbo Lammaa Magarsaa, afaan yaa’ii paarlaama biyyatti kan turan Obbo Abbaa Dulaa Gammadaa, sadarkaa itti aanaa prezidaantiitti itti gaafatamaa waajiira DHDUO Dr.Abiiy Ahmed akkasumas bulchiitu magaalaa Laga Xaafoo Laga daadhii Aaddee Caaltuu Saanii turan.
Gaaffii fi Deebii abukaattotaa caqasaa
Namii Oromoo kumii hedduun wal dhaba naannoo Soomaletiin baqate fulaa hedduu qubate ammaan tana maan keessa jiraa, gargaarsa argachuutti jiraa?